Ukuhlukaniswa kwempahla at yesehlukaniso - inkundla ekahle ingxabano, okuvame ukuba axazulule enkantolo. Nokho, uma unezinkinga musa ugijimele nge nokufakwa isimangalo. Ixhumana nommeli ongumakad 'ebona umndeni ukuthola izindlela ukuvumela isiphetho owandulela ukuqulwa kwecala kwenzinye izingxabano futhi ukuza nokubuyisana. luvamile nasezikhathini umkhuba izimo lapho ngaphansi kwethonya imizwelo ingenye amaqembu engathandi ulalele emaphuzwini iseluleko, inxusele. Kodwa kule nqubo kuba sobala ukuthi kuthatha zishintshe okungekuhle, futhi basayine isivumelwano global ikhambi kunengqondo.
Kungani kubalulekile ukuba siphethe isivumelwano?
sivumelwano Global ku ukuhlukaniswa kwempahla ka abashadayo inikeza amathuba amaningi ukulawulwa amalungelo neziqinile kuso noma yisiphi izimo bavumelana ukuthi amaqembu, akuyona ngokuphambene nomthetho kungenzeka zifakwe. Kungaba kuphela zibe isihloko impahla ngokuhlanganyela kuluthola. impahla Gratuitously wathola, wathenga izinto izingane, imali evulwe egameni yabo, kanye namalungelo angaphatheki akunaziqondiso lomqulu.
Ukuya enkantolo - akuyona nje izindleko ngemali okukhulu, kodwa futhi kudingeka ulandele umthetho njengoba unjalo. Isinqumo senkantolo ezithathwe kohlaka umthetho, futhi abaningi izimo zomuntu siqu, ngesikhathi esifanayo sihlale sibukela. Ngenxa yalokho, kungase kucindezele zombili futhi kuholele isikhalazo elingapheli.
The kungenzeka isivumelwano ngokuthula phezu ukuhlukaniswa kwempahla somshado ngesikhathi umshado lapho futhi ingakapheli iminyaka engu-3 ngemva kwesehlukaniso. Kungase isayinwe hhayi kuphela e-oda owandulela ukuqulwa kwecala, kodwa ngemva nokufakwa isimangalo phambi isinqumo senkantolo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi isivumelwano phezu ukuhlukaniswa kwempahla kumele abe phakathi kwendoda nomkayo kuphela, e kungenzeka khona ephathini kuthengiselana lwesithathu nilenze. Akungabazeki ukuthi ukuhlukaniswa kwempahla ngokuvamile kuthinta izithakazelo abantu abakweletwayo, bezimali kanye nezinye izinhlangano, kodwa amalungelo abo kunqunywa izinto ngazinye yesivumelwano, kunokuba ngokwandisa isibalo samaqembu. sivumelwano Global ku ukuhlukaniswa kwempahla ka abashadayo akudingi notarization. Ukuze wenze umbhalo idokhumenti othumele nomthetho futhi ngokwanele kubonise izithakazelo amaqembu adinga ukukhuluma nommeli.
Yini lihlukile isivumelwane sivumelwano prenuptial?
Enye indlela yokugwema izingxabano isehlukaniso isiphelo sesimiso inkontileka umshado. Lo mbhalo isivumelwano phezu ukuhlukaniswa kwempahla somshado, sokunquma nelungelo ngenkathi beshadile phezu isehlukaniso. Inkontileka umshado kunikeza ithuba ukusungula ubunikazi kanye imodi ukusetshenziswa kwempahla, futhi ucacise nemibandela okuqukethwe mutual. kuncike ayo akwazi kakade ozotholwa ubunikazi ngokuhlanganyela, ngasese kwempahla uhlangothi, wathenga ngaphambi komshado noma wathola mahhala emva isiphelo sako, kanye amafa ithengwe esikhathini esizayo. amalungelo angaphatheki kanye nobudlelwane siqu ayikwazi kubuswa idokhumenti nakho akukho emthethweni izimo ukuthi ukubeka yimiphi owakwakhe esimweni sezimali disadvantageous. Incwadi yesivumelwano umshado zingenziwa bomshado noma yibaphi abanye abantu Uyoshada. Ngaphandle notarization akanasabelo amandla ngokomthetho.
Settlement sivumelwano inkontileka ngomshado - zingamathuluzi ngempumelelo ukuze alawule yasemshadweni ubudlelwane impahla. Njengoba lesi siphetho kuyiqiniso imikhaya abavamile Russian? Abameli incoma ukuthi imibhalo idatha owakwakhe ngokuhlanganyela bazibandakanya emsebenzini owodwa owenziwe commercial, kanye ekuzuzeni loan ingcebo nezimoto. Ukunqunywa oda izibopho ukubuyiswa kwemali kanye kwesigaba ibhizinisi isehlukaniso izigaba kuyinkimbinkimbi kakhulu izimo.
Magnolia - umuthi ubuhle amazing nge ukunambitheka esiyingqayizivele
Umdlavuza Ukwelashwa kwa-Israyeli
Amagilebhisi Maiden engadini endaweni suburban
Football club eziphezulu eNgilandi: yokulinganisela, amalogo, nabadlali Izibuyekezo